Rwanda ayaa la geyn doona dufcadii ugu horaysay ee magangalyo doon ah - Axadle Wararka Maanta
By axadle	 On May 22, 2022
Rwanda ayaa filaysa in kooxdii ugu horreysay ee 50 magan-galyo doon ah la geeyo kuwaa oo laga soo wareejiyo Boqortooyada Ingiriiska dhammaadka May, afhayeen u hadlay dowladda ayaa sheegay.
Bishii Abriil, dawladda UK waxay ku dhawaaqday qorshe ay dadka magangelyo doonka ah ugu diri doonto waddanka ku yaal Bariga Afrika. Laakiin horraantii bishan, waxay sheegtay inay filayso qareennada inay soo gudbiyaan dacwadaha looga hortagayo raritaankooda.
“Sida laga soo xigtay xogta aan hayno, qaybta ugu horreysa ee soogalootiga waxay imaan doontaa dhammaadka bisha,” ku xigeenka afhayeenka xukuumadda Rwanda Alain Mukurinda ayaa sidaas yidhi Khamiista. Laakin… waa dawladda Ingiriiska ta garanaysa inta iman doonta iyo goorta ay iman doonaan.
Bishii Abriil, labada dal waxay saxiixeen heshiis muran dhaliyay oo dhanka socdaalka si loogu qaado kuwa sharci darrada ku soo gala UK dalka bariga Afrika ku yaal. Dhinaca kale qorshaha, Rwanda waxaa waaye in ay hesho $158m.
Hay’adda Qaramada Midoobay u qaabilsan qaxootiga (UNHCR) ayaa dhaleeceysay qorshahan iyadoo ku tilmaantay “xadgudub xun oo sharciga caalamiga ah” iyadoo “ka soo horjeeda warqadda iyo niyadda heshiiska qaxootiga”.
‘Dhabka Xoriyada’ Rwanda
Dowladda Ruwaanda ayaa tiro saxafiyiin ah in ay soo indho indheeyan uu geeysay hoteello loo qorsheeyey si ay u dejiyaan magangelyo-doonka laga keenayo UK.
Ismaaciil Bakina, oo ah maamulaha Hope Guesthouse, ayaa sheegay in qabanqaabadani ay tahay in qof kasta oo soo galooti ah oo la dejiyo hoyga ay dawladda UK siin doonto lacag u dhiganta 70 doolar maalintii, taas oo ay ku jirto cunto. Dowladda UK ayaa sheegtay in qorshaha dadka loogu dirayo Rwanda uu marka hore dowladda ku kacayo lacag dhan 158 milyan oo doolar.
Wadamada kale ee reer galbeedka sida Danmark ayaa iyaguna ka fekeraaya heshiisyo la mid ah kan Rwanda oo kale.
Benin is preparing to withdraw its troops from Minusma
Finland prepared to offer Turkey ensures